ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စီမံဆောင်ရွက်ထားဟု WHO ပြော - Xinhua News Agency
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်က တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်း-ကျန်းကျားခို မြန်နှုန်းမြင့် ရထားပေါ်တွင် ရထားအကူမယ်တစ်ဦးက ၂၀၂၂ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ အမှတ်တရပစ္စည်းများကို ခင်းကျင်းပြသနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
စင်ကာပူ ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရှေ့လ(ဖေဖော်ဝါရီလ)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ၂၀၂၂ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကာလတွင်း COVID-19 ကပ်ရောဂါဘေးမှ ကင်းဝေးလုံခြုံစေရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီမံဆောင်ရွက်ထားမှုများသည် တင်းကျပ်ခိုင်မာမှုရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) မှ အကြီးတန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ရှိ အိုလံပစ်တာဝန်တိုင်တွင် ၂၀၂၂ ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ် မီးရှူးတိုင်ထွန်းညှိထားသည်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့်ထုတ်ဝေသည့် Lianhe Zaobao သတင်းစာတွင် ဖော်ပြချက်အရ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) အရေးပေါ်ဌာနများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Michael Ryanက ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု၌ အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အားကစားပြိုင်ပွဲများကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးမှု စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ်ကော်မတီနှင့်အတူ ကုလသမဂ္ဂ၏ ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီက အနီးကပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ အားကစားပွဲလုပ်မယ့်နေရာမှာ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက ရောဂါကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်ထားပါတယ်။ သူတို့က မတူကွဲပြားတဲ့ အားကစားလက်စွဲစာအုပ်ပေါင်းများကိုလည်း ထုတ်ဝေဖြန့်ချိထားပါတယ် ” ဟု Ryan က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ အားကစားပွဲလုပ်မယ့်နေရာတိုင်းမှာ ရောဂါကာကွယ်ရေးအ
စီအစဉ်တွေကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ခိုင်ခိုင်မာမာ လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အပြည့်အဝ ယုံကြည်ပါတယ် ၊ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ ပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်လို ရောဂါကူးစက်မှု အန္တရာယ်မှ ရှိလိမ့်မည်လို့ ကျွန်တော်တို့ မမြင်မိပါဘူး” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၂၂ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို လာမည့် ဖေဖော်ဝါ ၄ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
SINGAPORE, Jan.9(Xinhua) — Beijing’s plans to ensure next month’s 2022 Winter Olympics go ahead safely during the COVID-19 pandemic look strong,asenior expert from the World Health Organization (WHO) has said.
According to Singapore’s Chinese-language paper Lianhe Zaobao, WHO emergencies director Michael Ryan made the remarks duringanews conference on Thursday. He said the United Nations’ health agency had worked with the International Olympic Committee to provide technical advice on the safe hosting of the games.
The Beijing Winter Olympics will kick off on Feb. 4.
Photo (1) A crew member displays souvenirs themed the 2022 Beijing Winter Olympics onatrain of the Beijing-Zhangjiakou high-speed railway on Dec. 30, 2021. (Xinhua/Huang Zhen)
Photo (2) The Olympic flame for the 2022 Beijing Winter Olympics is on display at the Olympic Tower in Beijing, capital of China, Oct. 20, 2021. (Xinhua/Wang Yong)